Jijiga waxaa ka jira Xiisad Ciidan! – Rasaasa News
February 26, 2020 – Jijiga waxaa la keenay ciidan badan oo milatari ah. Xogo hoose ayaa sheegaya in ciidamadani, ka yimaadeen magaalada Harar oo xarun u ah qaybta bari ee ciidanka Itoobiya.
Lama sheegin sababta ka dambaysa diyaar garowga ciidaanka iyo cida ay saamayn doonto midna.
Waxaa maalmahan jiray xurguf siyaasadeed oo u dhaxaysa maamulka Somaliland iyo Itoobiya, ka dib kolkii ay dadwaynaha Soomaaliland diideen qorshe ay soo maleegeen dalalka Turki iyo Qatar oo loo soo dhiibay in uu fuliyo Abiy Ahmed.
Waxaa kale oo la sheegay in ay isku dhaceen ONLF iyo maamulka Soomaalidu. Mustafe Cagjar ayaa amray in madaxda ONLF laga xidho xafiisyada, lagana dhigo gaadiidka, iyo in waliba laga reebo ilaaladii la socota madaxda ururka.
Waxaa kale oo jira siidaynta 63 maxbuus, oo daro sare leh, kuwaas oo isugu jira qoomiyadaha Axmarada iyo Tigray, lama sheegin in uu ku jiro madaxwaynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Iley.
Dhinaca kale shacabka deegaanka Soomaalida ayaa aad uga soo horjeeda siyaasada cusub ee Abiy Axmed iyo madaxda deegaanka. Waxaa la baabi,iyey xisbigii ka talin jiray deegaanka Soomaalida 27kii sano ee la soo dhaafay. Waxayna isugu soo ururtay siyaasadii Itoobiya hal xisbi oo uu madax ka yahay Abiy Axmed.
Dec 7, 2018 Rasaas